2 Makabeo 3 - Ny Baiboly
2 Makabeo toko 3
Oniasa mpisorona masina nahazo fiarovana mahagaga ny rakitry ny tempoly, tsy ho lasan'i Heliodora irak'i Seleokosa - Ampangain'i Simona izy, ka mangataka fitsarana any amin'ny mpanjaka.
1Raha mbola tao anatin'ny fandriam-pahalemana tanteraka ny mponina tao amin'ny tanàna masina, sady mbola voatandrina tsara ny lalàna, noho ny fitiavam-bavak'i Oniasa mpisorona lehibe sy ny fankahalany ny ratsy, 2na ny tenan'ireo mpanjaka aza nety nanaja ny fitoerana masina, sy nandravaka ny tempoly tamin'ny fanomezana kanto; 3hany ka Seleokosa mpanjakan'i Asia aza no niantoka ny lany rehetra amin'ny fanaovana ny sorona, avy amin'ny zavatra niditra ho azy.
4Nisy Simona anankiray izay anefa, avy amin'ny firenen'i Benjamina, voatendry ho mpanapaka ny tempoly, rafitra niady tamin'ny mpisorona lehibe, amin'ny momba ny fitandremana ny tsena ao an-tanàna. 5Tsy afa-nandresy an'i Oniasa izy, ka lasa nankany amin'i Apolloniosa zanak'i Trasea, governoran'i Sele-Siria sy Fenisia momba ny foloalindahy tamin'izany andro izany. 6Nolazainy tamin'io fa ny trano firaketana ao Jerosalema dia feno vola mihoa-pampana, misy harena tsy hita pesipesenina, tsy mifanentana velively amin'ny lany amin'ny zavatra ilaina hanaovana sorona, ary azo hafindra ho eo an-tanan'ny mpanjaka avokoa izany rakitra izany.
7Nony tafaresaka tamin'ny mpanjaka Apolloniosa, nampandrenesiny azy izany harena voalaza taminy izany, ka nanendry an'i Heliodora izay voatendry hitondra ny raharaham-panjakana ny mpanjaka, dia naniraka sy nanome teny an'io haka izany harena voalaza izany. 8Niainga niaraka tamin'izay Heliodora mody hoe hizahazaha ny tanànan'i Sele-Siria sy Fenisia, kanjo ny hanatanteraka ny hevitry ny mpanjaka no tena fotony.
9Nony tonga tao Jerosalema Heliodora nandray azy tamim-pitiavana ny mpisorona lehibe tao an-tanàna; dia notantarainy ny zavatra reny; nasehony ny antony nahatongavany; ary nanontaniany na marina tokoa ny zavatra reny, na tsia. 10Ka nasehon'ny mpisorona lehibe taminy, fa zavatra napetraky ny mpitondratena sy ny kamboty no ao amin'ny rakitra; 11ny sasany koa an'i Hirkana zanak'i Tobia, lehilahy manan-kaja indrindra; ary tsy izay nolazain'i Simona mpanendrikendrika mankahala fivavahana akory no tena toe-javatra, fa ny tontalin'ny harena ao dia talenta volafotsy efa-jato, sy talenta volamena roan-jato; 12sady tsy azo atao velively ny mamabo ny an'ireo natoky noho ny fahamasinan'io fitoerana io, sy noho ny fiambonian'ny tempoly, tsy azo inaikanaikana, hajaina eran'izao tontolo izao. 13Nilaza mihitsy anefa izy io, noho ny didy azony tamin'ny mpanjaka, fa tsy maintsy hoentina ho any an-trano firaketan'ny mpanjaka izany vola izany.
14Koa rahefa noferany ny fotoan'andro, dia handeha hiditra izy hizaha izany harena izany, alohan'ny hanapahany izay hanaovany azy; ka tabataba lehibe no velona tao an-tanàna manontolo noho izany. 15Niankohoka teo anoloan'ny otely ny mpisorona, nitondra ny akanjony fisoronana, niandrandra ny lanitra, nivavaka amin'ilay nanao ny lalàna momba ny zavatra napetraka, mba hitehirizany tsy misy afaka izany harena izany ho an'izay nametraka azy. 16Voatsindrona lalina indrindra ny fo, raha nijery ity tarehin'ny mpisorona lehibe, fa niseho tamin'ny endriny sy ny fiovan'ny tarehiny, ny fanahiana nanjò ny fanahiny. 17Ny fahatrotrahana niseho tamin'ny tenany manontolo sy ny fangovitry ny vatany koa dia nampiharihary ny fahorian'ny fony, teo imason'ny olona rehetra. 18Nidodododo nanao andiany ny mponina nivoaka ny tranony, dia niara-nivavaka avokoa, mba tsy hihatra amin'ny fitoerana masina izato fanalam-baraka. 19Ny lalambe rakotry ny vehivavy, voatafy malailay ny tratrany; izay zazavavy nihiboka dia nidodododo koa, ny sasany nankeo am-baravarambe, ny sasany nankeny amin'ny manda, ny sasany kosa nijery teo am-baravarankely, 20samy nanandra-tànana mankany an-danitra nandefa fitarainana. 21Nampangorakoraka ny hareraham-pon'ireto vahoaka nifanjevo, sy ny fanahian'ity mpisorona lehibe feno tebiteby. 22Ny Jody tamin'izany nitaraina tamin'ny Tompo mahefa ny zavatra rehetra, hitahiry tsy ahafahana, sady tsy hisy hahakasika azy, ny zavatra napetraka mba ho an'izay nametraka azy. 23Heliodora kosa efa nanatanteraka ny fikasany. Tamin'izy mbamin'ny mpanaraka azy efa mby teo akaikin'ny trano firaketana, 24no nanaovan'ny Tompon'ny fanahy sy mpanapaka ambonin'ny fahefana rehetra fampisehoana lehibe, hany ka izay rehetra sahy nankeo, azon'ny herin'Andriamanitra, tsy nanan-kery hahavita na inona na inona, sady nivadi-po avokoa. 25Niseho teo imason'izy ireo ity soavaly taingenan'olona mahatsiravina, ary voarakotra lamba sarobidy, miezaka mirimorimo, nampitsikaroka ny tongony anoloana, teo ambonin'i Heliodora; ary toa fiadiana volamena no hita teny amin'ilay mpitaingin-tsoavaly. 26Niaraka tamin'izay koa indreo niseho taminy ny zatovo roa lahy, feno herim-po, namirapira-pahazavana lehibe, nitondra akanjo kanto loatra; teo an-daniny avy izy no nijoro, dia nikapoka azy tsy an-kijanona, nataony vely kary. 27Niankarapoka tampoka tamin'ny tany Heliodora sady voahodidin'ny aizim-pito, dia notakonana natao teo amin'ny filanjana anankiray, 28ka ilay lehilahy, vao avy niditra tao amin'ny efitrano nisy ny rakitra voalaza, notronin'ny mpihazakazaka sy ny mpiambina mitam-piadiana rehetra, dia indro nobetaina tsy nahazaka tena, hita maso ho nidonan'ny herin'Andriamanitra. 29Dieny mbola teo ihany izy, nianjeran'ny kapoky ny herin'Andriamanitra, miampatra tsy mahateny, mamoy fo sy tsy manan-kamonjy intsony; 30ny Jody kosa nisaotra ny Tompo, fa nomeny voninahitra ny fitoerana masina, ary ny tempoly izay vao teo no teo no feno fivadiam-po sy fikorontanana, tonga feno hafaliana amam-piravoravoana, noho ny fanehoana nataon'ny Tompo tsitoha.
31Niaraka tamin'izay, ny sasany tamin'ireo naman'i Heliodora nangataka tamin'i Oniasa hivavaka amin'ny Avo indrindra sy hamelona an'itsy mitsitra eroa, efa tsy misy afa-tsy aina kely foana. 32Ary ny mpisorona lehibe natahotra fandrao ny mpanjaka hihevitra ny Jody ho nitady hamono an'i Heliodora, ka dia nanolotra sorona ho an'ny ain-dralehilahy. 33Mbola manolotra sorona fifonana eo ny mpisorona, dia niseho tamin'i Heliodora indray ireo zatovo, nitondra ny akanjony teo ihany, ary nitsangana izy no nilaza taminy hoe: Omeo fisaorana lehibe Oniasa mpisorona lehibe, fa noho izy ihany no amelan'ny Tompo anao ho velona. 34Fa hianao kosa, rahefa nofaiziny toy izao, torio amin'ny olona rehetra ny fahefan'Andriamanitra lehibe. Nony voalazany ireo teny ireo, dia lasa tsy hita intsony izy. 35Nanatitra sorona ho an'ny Tompo Heliodora sy nanao voady lehibe tamin'ilay namelona ny ainy. Rahefa izany, nanome toky an'i Oniasa fa hihavana aminy izy; dia niverina niaraka tamin'ny miaramilany, ho any amin'ny mpanjaka. 36Ary nataony tsara laza tamin'ny olona rehetra ny asan'Andriamanitra lehibe hitany maso. 37Nanontanian'ny mpanjaka an'i Heliodora, izay olona tokony hirahina ho an'i Jerosalema indray, ka izao no navaliny azy: 38Raha manana fahavalo na rafilahy amin'ny fanjakana hianao, dia izay hirahina any, fa ho kotiky ny kapoka izy, vao ho tafaverina aty aminao, raha tany ka mba afaka ihany; fa misy hery avy amin'Andriamanitra marina amin'io fitoerana io. 39Ilay manana ny fonenany any an-danitra no miambina io fitoerana io, ka izay tonga any manan-kevitra ratsy, dia asiny sy ataony levona mihitsy.
40Izany no zava-nitranga momba an'i Heliodora, sy ny nahatanana ny rakitra masina. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0922 seconds